Beddelaan Yen In Oo shilin Soomaali
UN xogta heerka sarrifka ee 24/05/2022 12:44
Yen In Oo shilin Soomaali beddelaad. Yen qiimaha maanta ee Oo shilin Soomaali maanta suuqa sarrifka lacagta.
1 Yen = 4.52 Oo shilin Soomaali
Sicirka sarrifka Yen to Oo shilin Soomaali wuxuu leeyahay qiime dhexdhexaad ah dhamaan ilaha. Macluumaadka ku saabsan isu beddelka Yen illaa Oo shilin Soomaali ayaa la cusbooneysiiyaa maalintiiba hal mar. Dhammaan hawlgallada sarrifka lacagaha waxaa lagu sameeyaa bangiyada. 1 Yen waa 4.52 Oo shilin Soomaali. Yen wuxuu kacaa kudhawaad Oo shilin Soomaali ilaa shalay. Qiimaha 1 Yen wuxuu hadda la mid yahay 4.52 Oo shilin Soomaali.
Heerka Sarrifka Yen In Oo shilin Soomaali
Lix bilood ka hor, Yen waxaa laga iibsan karaa 4.98 Oo shilin Soomaali. Sadex sano ka hor, Yen waxaa lagu iibin karaa 5.34 Oo shilin Soomaali. Toban sano ka hor, Yen waxaa laga iibsan karaa 5.35 0 Oo shilin Soomaali. 2.94% toddobaadki - isbeddelka heerka sarrifka Yen. 5.57% bishii - isbeddelka heerka sarrifka Yen. Isbeddelka heerka sarrifka lacagaha Yen to Oo shilin Soomaali muddo hal sano ah ayaa -15.51%.
Bedelaha lacagaha Yen Oo shilin Soomaali
Yen (JPY) In Oo shilin Soomaali (SOS)
1 Yen 4.52 Oo shilin Soomaali
5 Yen 22.62 Oo shilin Soomaali
10 Yen 45.23 Oo shilin Soomaali
25 Yen 113.08 Oo shilin Soomaali
50 Yen 226.16 Oo shilin Soomaali
100 Yen 452.33 Oo shilin Soomaali
250 Yen 1 130.82 Oo shilin Soomaali
500 Yen 2 261.65 Oo shilin Soomaali
Beddelka lacagta maanta loogu talagalay 10 Yen ayaa bixisa 45.23 Oo shilin Soomaali. Waad ku iibin kartaa 25 Yen ee loogu talagalay 113.08 Oo shilin Soomaali . Hadaad leedahay 226.16 Oo shilin Soomaali, ka dibna gudaha Soomaaliya waad iibsan kartaa 50 Yen. Hadaad leedahay 100 Yen, ka dibna gudaha Soomaaliya waa lagu iibin karaa 452.33 Oo shilin Soomaali. Waad ka iibsan kartaa 250 Yen ee loogu talagalay 1 130.82 Oo shilin Soomaali . Beddelaadda lacagta ayaa hadda bixisa 2 261.65 Oo shilin Soomaali for 500 Yen.
Yen In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka
Yen In Oo shilin Soomaali maanta 24 May 2022
24.05.2022 4.462217 0.193202 ↑
23.05.2022 4.269015 -0.068771 ↓
22.05.2022 4.337786 -0.236148 ↓
21.05.2022 4.573934 0.041879 ↑
20.05.2022 4.532055 0.098406 ↑
1 Yen to Oo shilin Soomaali ayaa hada socda 24 May 2022 - 4.462217 Oo shilin Soomaali. 23 May 2022, 1 Yen kharashyada 4.269015 Oo shilin Soomaali. Yen to Oo shilin Soomaali dusheeda 22 May 2022 waa u siman yahay 4.337786 Oo shilin Soomaali. 21 May 2022, 1 Yen = 4.573934 Oo shilin Soomaali. Ugu yar Yen to Oo shilin Soomaali rate in ayaa jiray 23.05.2022.
Yen iyo Oo shilin Soomaali calaamadaha lacagta iyo waddamada
Yen calaamadda lacagta, Yen calaamad lacag: ¥. Yen Gobolka: Japan. Yen lacagta code JPY. Yen Qadaadiic: sen.